नेप्से बढ्यो, कारोवार रकम घट्यो: कसले कमायो–कसले गुमायो ? (तालिका–सहित)
काठमाडौं, १ कार्तिक । साताको चौथौ कारोवार दिन आज बुुधबार नेप्से बढेपनि कारोवार रकम भने घटेको छ । नेप्से आज नौ दसमलव १७ अंकले बढेर १५ सय ६८ दसमलव ३५ अंकमा कायम रहेको छ भने सेन्सिटिभ एक दसमलव ७६ अंकल...
नेप्से आज पनि मध्यान्हसम्म तीन अंकले घट्यो, चार करोडको मात्र सेयर किनबेच
काठमाडौं, १ कार्तिक । नेप्से आज पनि नकारात्मक देखिएको छ । साताको चौंथौ कारोवार दिन आज बुुधबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म नेप्से तीन दसमलव ६६ अंंकले घटेको छ भने सेन्सिटिभ एक दसमलव तीन अंकले घटेको छ । यस बि...
नेप्सेमा सुधार जारी: मध्यान्हसम्म तीन अंकले बढ्दा १४ करोड ८२ लाखको कारोवार
काठमाडौं, ३१ असोज । नेप्से आज पनि सुधारोन्मुुख देखिएको छ । अपरान्ह १२ बजेसम्म नेप्से तीन दसमलव १३ अंकले बढेको छ भने सेन्सिटिभ शुन्य दसमलव ९१ अंकले बढेको छ । यसबिचमा नेप्से १५ सय ६८ दसमलव तीन अंकमा पुु...
६१ अर्ब ६१ करोडको आन्तरिक ऋण उठाउँदै राष्ट्र बैक
काठमाडौं, ३० असोज । राष्ट्र बैंकले ६१ अर्ब ६१ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण निष्काशन गर्र्नेे भएको छ । चालुु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा ५७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण निष्क...
नेप्सेमा आठ अंकको बृद्धि, कसले कमायो–कसले गुमायो ? (तालिका–सहित)
काठमाडौं, २९ असोज । साताको पहिलो कारोवार दिन आज आईतबार नेप्से सुचक तथा कारोवार रकम दुुबै नै बढेका छन् । आज नेप्से आठ दसमलव २६ अंकले बढेर १५ सय १८ दसमलव २८ अंकमा कायम रहेको छ भने नेप्से सेन्सिटिभ पन...
नेप्से साताभर एक अर्ब ७६ करोड ५९ लाखको सेयर किनबेच (तालिका-सहित)
काठमाडौं, २७, असोज । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १७२ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार २०००८ कारोबारबाट एक अर्ब ७६ करोड ५९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरका ३९ लाख ४३ हजार आठ सय १० कित्ता सेयरहरु खर...
रिलायन्स फाईनान्सको २३ करोड रुपैयाँको हकप्रद स्वीकृत
काठमाडौं, २६ असोज । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स फाईनान्स कम्पनीको २३ करोड छ लाख ५७ हजार एक सय ६० रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले बुुधबार उक्त फाईना...
नेप्से सुधार, मध्यान्हसम्म तीन दसमलव ४८ अंकको बृद्धि
काठमाडौं, २५ असोज । नेप्से आज सुधारोन्मुुख देखिएको छ । मध्यान्ह १२ः३० बजेसम्म नेप्से तीन दसमलव ४८ अंकले बढेको छ भने सेन्सिटिभ शुन्य दसमलव ७५ अंकले बढेको छ । यसबिचमा कुुल ९६ कम्पनीहरुको पाँच सय ७१ ...